23 mey — I masindahy Didier dia avy au Autun ary voatendry ho eveka tao Vienne tamin'ny 595. Tamin'izany fotoana izany dia ny mpanjakavavy Brunehaut na Bruehilde no nitondra an'i Austrasie, satria mbola tsy ampy taona ny zafikeliny izay handimby eo amin'ny fitondrana.
Ratsy toetra sy ratsy fitondran-tena tokoa ity mpanjakavavy ity, ka tsy sasatra i Didier, eveka ny manakiana sy mampieritreritra azy amin'izany tsy rariny sy toetra ratsy ataony teo amin'ny fitondrana izany. Mba hampanginana an'i Didier, dia niantso Kônsily i Brunehaut tao Chalon, Bourgogne, ka tamin'io no niampangana azy ho nanolana tovovavy nantsoina hoe Justin, io tovovavy io dia mpiasa tao amin'ny lapa nisy ny mpanjakavavy Brunehaut, ary nampijoroana ho vavolombelna mihitsy mba hiampangana an'i Didier, evekan'i Vienne tamin'izany fotoana izany. Nalefa sesitany i Didier, ka telo taona tao aorian'izay, rehefa maty ireo olona niampanga dia naverin'i Brunehaut hiverina tao an-tanana indray i Didier. Tsy nitsahatra anefa ity eveka ity namotsipotsitra ny tsy nety nataon'i Brunehaut, indrindra tamin'izany ny famonoana olona sy ny tsidrihazolena. Hany herin'ity mpanjakavavy ity dia naniraka miaramila mba hitora-bato azy tao amin'ny katedraly ary ka vokatr'izany tora-bato izany i Didier.
Io toerana namonoana an'i Masindahy Didier io ilay nantsoina hoe Saint-Didier-sur-Chalaronne, ny Fiangonana ao Varepe dia nampitondra ny anaran'i Didier ny fiangonana maro ao Isère. Ary ny sary hamantarana an'i Masindahy Didier dia lehilahy iray mitondra ny palme famantarana ny martiry ary misy anjely roa mitondra boky eo anilany, dia hita hiany koa ny mitondra tehina sy satroka manamarika ny maha eveka sy ny ma ampiandry ondry ary ny maha mpampianatra azy.